Sea Lion Inaugurates new Distribution Solutions Centre worth USD 10 million in Yangon — Sea Lion
Yan Naing Phyo
Sea Lion Inaugurates new Distribution Solutions Centre worth USD 10 million in Yangon
Yangon, Myanmar, May 25, 2019 -- Sea Lion,aleading provider of healthcare, biomedical, life science, technical education, and industrial solutions in Myanmar, today launches the new Distribution Solution Centre (DSC) to improve supply chain efficiency and to fulfil rising and changing demands of customers.
Union Minister, Ministry of Health and Sports H.E. Dr. Myint Htwe, Chairman of Union Peace Commission H.E. Dr. Tin Myo Win, Chief Minister of Yangon Region H.E. U Phyo Min Thein, Former Union Minister, Ministry of Health Prof. Pe Thet Khin, Senior Commercial Officer of the Embassy of the United States of America Mr. John Fleming, and Group MD of Sea Lion Dr. Win Zaw Aung cut the ribbon to open the new Distribution Solutions Centre and then toured the facility and “Integrating Innovations for Lives” Exhibition. The Union Minister witnessed the signing of an EOI (Expression of Interest) for 1-million-dollar Scholarship Program for Healthcare Professionals for overseas trainings, and the Chief Minister witnessed the signing of an EOI (Expression of Interest) for Coorperation on Food Safety of Food Establishments in the City of Yangon. Sea Lion also signed an MOU (Memorandum of Understanding) with the Biomedical Engineering Society (BES) of Singapore for Collaboration in the area of Biomedical Engineering for safety use of medical devices.
Sea Lion Distribution Solutions Centre is designed by Civil Tech International Co Ltd of Thailand. The project was supervised by Sea Lion Civil Tech Consulting Co Ltd and it took 13 months to complete.
DSC is equipped with the most modern infrastructure, robust technologies, SAP Enterprise Resource Planning, and Warehouse Management System to offer efficient supply chain solutions in climate controlled warehousing, online inventory management, and Nation-wide distribution.
The next step in the master plan of DSC expansion is to buildamanufacturing facility for the healthcare products to optimize the supply chain management and to help offer affordable quality healthcare products in Myanmar.
Sea Lion is ISO 9001:2015 certified for quality management systems. DSC is in the final process to be certified ISO 13485:2016 for quality management systems for medical devices and related services.
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀သန်းတန်ဖိုးရှိ Sea Lion Distribution Solutions Centre (DSC) ဖွင့်လှစ်
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ရက် (ရန်ကုန်မြို့) - မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေး၊ ဇီဝသိပ္ပံ၊ သတ္တသိပ္ပံ၊ နည်းပညာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့် စက်မှုကဏ္ဍများတွင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Sea Lion သည်ကုန်စည် စီးဆင်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းများ၏ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသော လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် Distribution Solutions Centre (DSC) ကို ယနေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ပါမောက္ခဦးဖေသက်ခင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံး အကြီးတန်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအရာရှိ Mr. John Fleming နှင့် Sea Lion Group ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဝင်းဇော်အောင်တို့က Sea Lion Distribution Solutions Centre (DSC) အား ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး အဆောက်အဦ နှင့် “Integrating Innovations for Lives“ ပြပွဲအား လှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် Sea Lion မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း (1,000,000 USD) စတင် ရင်းနှီးမတည်၍ Scholarship Grant များပံ့ပိုးမည့် EOI (Expression of Interest) သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းအား အသိသက်သေပြုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှ ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းရှိ အစား အသောက်ရောင်းချနေသောဆိုင်များ အစားအသောက်သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ဘေးကင်းရေးအတွက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး EOI (Expression of Interest) သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအား အသိသက်သေပြု ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် Sea Lion သည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ Biomedical Engineering Society (BES) နှင့် ဆေးရုံ/ ဆေးခန်းသုံးစက်ကိရိယာများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် Biomedical Engineering ကဏ္ဍတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် MOU (Memorandum of Understanding) စာချုပ်ကိုသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ကျန်စစ်သားစက်မှုဇုန်တွင်တည်ရှိသည့် Sea Lion Distribution Solutions Centre သည် ၆,၈၇၀ စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး မြေဧက ၈.၇ ပေါ်တွင် တည်ဆောက် ထားခြင်းဖြစ်သည်။
“DSC သည် မိမိတို့၏ နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များ၏ တင်းကျပ်သော လိုအပ်ချက်များ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကဏ္ဍများ၏ စံနှုန်းများအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးရုံသုံး တန်ဖိုးမြင့်စက်ပစ္စည်းများ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတပ်ဆင်ရမည့်ဆေးပစ္စည်းများ၊ တခါသုံးဆေးပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးများ အစရှိသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို စနစ်တကျသိုလှောင်သိမ်းဆည်းရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရေး တို့တွင် လစ်ဟာမှုမရှိဘဲ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အာမခံမှုပေးနိုင်သည့် အဆောက်အဦတစ်ခု ဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်ထားသည်” ဟု Sea Lion Group ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာဝင်းဇော်အောင် က ပြောကြားသည်။
DSC ကို ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Civil Tech International Co Ltd က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး Sea Lion Civil Tech Consulting Co Ltd မှ တာဝန်ယူကြီးကြပ်ခဲ့ကာ တည်ဆောက်ရေးကာလ (၁၃)လ အတွင်း ပြီးစီး ခဲ့သည်။
DSC သည် ခေတ်မီ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ သွက်လက်မြန်ဆန်သော နည်းပညာများ၊ SAP Enterprise Resource Planning (ERP) နှင့် သိုလှောင်ရုံစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ် (WMS) များကို အသုံးပြုကာ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ထားသော သိုလှောင်ခန်းများ၊ အွန်လိုင်းကုန်စည်သိမ်းဆည်းမှုစာရင်းစီမံခန့်ခွဲရေးများ၊ နိုင်ငံတဝန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရေးအစရှိသည့် ပိုမိုစနစ်ကျ မြန်ဆန်ကောင်းမွန်သော ကုန်စည် ဖြန့်ဖြူးစီးဆင်းမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
DSC ၏ master plan ဗိသုကာဒီဇိုင်းတွင် ဒုတိယအဆင့်တိုးချဲ့ခြင်းအနေဖြင့် ကုန်စည်ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး ပိုမိုကောင်းမွန်ရန်နှင့် အများပြည်သူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မည့် အရည်အသွေးရှိ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါသည်။
Sea Lion သည် အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များအတွက် ISO 9001:2015 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားပြီး DSC သည်ဆေးရုံသုံးစက်ပစ္စည်းများအရည်အသွေးမြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့် အခြား ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ISO 13485:2016 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် အတွက် နောက်ဆုံးအဆင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Newer PostIBM's appointment of Sea Lion asalocal business partner in Myanmar
Older PostCollaboration Agreement Signing Ceremony between DTVET, Ministry of Education and Sea Lion & Global Partners for School of Industrial Training and Education (SITE)